ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း | ပြည့်စုံ
မောင်လေးရေ ... ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုပဲလေ။ ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀ ထပ်တူမကျနိုင်တဲ့ လောကကြီးမှာ ဖြစ်လာသမျှကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ခွန်အားတွေ တို့မွေကတည်းက ပါလာပြီးသားပါ။ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အချိန်မှာ ဒီလောကကြီးက ပေးသမျှ သင်ခန်းစာတွေကို လက်တွေ့ သင်ယူနိုင်ပါစေနော်။
ပြည့်စုံအဖေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလေးကို ကျွန်မ ညီမလေး ပြည့်စုံ ပြောလို့လဲ ကြားမိတယ် ကျွန်မကိုယ်တိုင်လဲ ကြားမိတယ်.
ကျွန်မတို့ ညီအစ်မတွေ အိမ်နဲ့ဖုန်းပြောလို့ အဖေ့အသံအတိမ်အနက် အတိုးအကျယ်ပေါ်မူတည်ပြီး အဖေ့ကျမ်းမာရေး စိတ်အနေအထားကို ခန့်မှန်းကြတယ် အဖေ့ကို အရမ်းချစ်တဲ့ သမီးနှစ်ယောက်စလုံး အဝေးရောက်နေချိန်မှာ အဖေတစ်ခုခုဖြစ်မှာ အရမ်းစိုးရိမ်ကြတယ်လေ..
ပြည့်စုံအဖေဆုံးတဲ့နေ့က အစ်မတို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်စလုံး တကယ့်ကို တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်..အားပေးစကားကို အခုမှ ပြောမိခဲ့တာ တောင်းပန်ပါတယ်နော်..ကိုပြည့်စုံလဲ အဖေ့အတွက် ကောင်းမူကုသိုလ်တွေ လုပ်ပေးနေမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ် ကျွန်မတို့ ပေးလှူတဲ့ ဒါနတွေအတွက်လည်း အမျှဝေပါတယ်
ပြည့်စုံအဖေ ကောင်းရာ သုဂတိ လားပါစေ...လားရာသုဂတိမှာလည်း အေးချမ်းငြိမ်းအေးစွာ နေနိုင်ပါစေရှင်
အခုလို တကူးတက ကျေးဇူတင်ကြောင်းပြောတဲ့ အတွက် ပန်းကလေး ကလည်းကျေးဇူတင်ပါတယ် ... အကို ဖေဖေ ကောင်းရာ သုဂတိ လားပါစေ .အကိုလည်း ကျန်မာပျော်ရွင်ပါစေ လို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် .
ပြည့်စုံရဲ့ မေမေကျန်းမာ ချမ်းသာဖို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်..
ပြည့်စုံဖေဖေလည်း ကောင်းမွန်ရာဘုံဘ၀ကို ရောက်ရှိပါစေ .. အကိုလည်း ကောင်းမွန်ရာဘုံဝကို ရောက်ရှိပါစေ ..
အဆင်ပြေပါစေ .. အဆင်မပြေမှုတွေ အမြန်ဆုံးပြေလည်ပါစေ ..